Induction Kuchenesa - Jiangsu Runau Electronics Kugadzira Co, Ltd.
Simba Magetsi Midziyo YeIncuction Heating
Induction kupisa kunonyanya kushandiswa kwesimbi yekunyungudika, kuchengetedza kupisa, kutsvaira, kumwaya, kudzima, kupisa, diathermy, kuchenesa simbi, kupisa kupisa, kukomberedza pombi, uye kukura kwekristaro. Iyo yekumisikidza magetsi magetsi inosanganiswazve neyekugadzirisa wedunhu, inverter wedunhu, mutoro wedunhu, kutonga uye dziviriro redunhu.
Iyo yepakati frequency magetsi emagetsi ekuisa induction kudziya tekinoroji inogadzirisa iyo irikushandisa yazvino magetsi frequency (50Hz) kunongedza simba ipapo inoshandura kuita yepakati frequency (400Hz ~ 200kHz) kuburikidza nemagetsi semiconductor zvishandiso senge thyristor, MOSFET kana IGBT. Iyo tekinoroji inoratidzira mune anodzora ekudzora nzira, hombe kuburitsa simba, uye yakakwira kushanda kupfuura iyo yeyuniti, uye zviri nyore kuchinja frequency maererano nezvinodiwa nekupisa.
Iyo inogadzirisa yemidziyo midiki uye yepakati magetsi ekushandisa inoshandisa matatu-chikamu thyristor kugadzirisa. Zvemagetsi emagetsi emagetsi-makuru, 12-kupomba thyristor kugadziriswa kuchashandiswa kusimudzira mwero wemagetsi emagetsi uye kudzikisa gridhi-parutivi harmoni yazvino. Iyo inverter simba unit inoumbwa neiyo yepamusoro-voltage yakakwira-ikozvino inokurumidza switch switch thyristor yakafanana ipapo nhevedzano yakabatana kuti ione yakakwira magetsi kuburitsa.
Inverter uye resonant redunhu inogona kuganhurwa mumhando mbiri zvichienderana neyakavakirwa zvivakwa: 1) yakafanana resonant mhando, 2) dzakateedzana resonant mhando.
Parallel resonant mhando: yakakwira-voltage yakakwira-yazvino mvura-yakanyoroveswa thyristor (SCR) inoshandiswa kugadzira yazvino-mhando inverter simba unit, uye yakakwira magetsi kuburitsa inoonekwa nekukwirisa kwe thyristors. Iyo resonant redunhu inowanzo shandisa yakakwana yakafanana resonance chimiro, zvakare sarudza mbiri-voltage kana shanduri modhi yekuwedzera iyo voltage pane inductor zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana, zvinonyanya kushandiswa mukupisa kurapwa maitiro.
Series resonant type: high-voltage high-current water-cooled thyristor (SCR) uye diode inokurumidza inoshandiswa kugadzira voltage-rudzi inverter simba unit, uye yakakwira magetsi kuburitswa kunoonekwa nekutungamirwa kwe thyristors. Iyo resonance redunhu inoshandisa yakateedzana resonance chimiro, uye iyo shanduko inogamuchirwa kuti ienzane nemutoro unodiwa. Mukuwedzera kune zvakanakira simba rakakwira chinhu paGridhi-parutivi, yakawandisa magetsi ekugadzirisa renji, kupisa kwakanyanya kushanda uye yakakwira yekutanga-up yekubudirira mwero, zvave kuwedzera uye zvakanyanya kushandiswa mumakore azvino uye zvakanyanya kushandiswa mukunyungudika maitiro.
Mushure mekuvandudzwa kwemaitiro ekugadzira, Runau akagadzira yekukurumidza switch thyristor inoshandisa neutron radiation uye mamwe maitiro ekuwedzera kupfupisa nguva yekudzima uye simba remagetsi rinovandudzwa zvichidaro.
Iyo induction yekupisa yepakati frequency magetsi magetsi anotora thyristor seyakanyanya magetsi mudziyo akafukidza minda yese neinoshanda frequency pazasi pe8kHz. Simba rekubuda kwesimba rakakamurwa kuita 50, 160, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000kW, 5000KW, 10000KW iyo frequency yekushandisa iri 200Hz, 400Hz, 1kHz, 2.5kHz, 4kHz, 8kHz. Matani gumi, matani gumi nemaviri, matani makumi maviri esimbi ichinyungudika uye kuchengetedza kwemafuta, chikuru simba michina isvikiro frequency magetsi. Iye zvino iro rakakwira simba rekubuda kwesimba rinosvika ku20000KW ye40Ton. Uye iyo thyristor ndiyo yakakosha simba shanduko & inversion chinhu chinoshandiswa.